Eden Hazard Oo Warkii Ugu Fiicnaa U Sheegay Taageerayaasha Real Madrid. - Gool24.Net
Eden Hazard Oo Warkii Ugu Fiicnaa U Sheegay Taageerayaasha Real Madrid.
Eden Hazard ayaa ka hadlay xaaladiisa kadib markii uu tababarka kooxdiisa si wada jir ah ula qaatay markii ugu horaysay tan iyo bishii February ee horaantii sanadkan. Kooxaha La Liga ayaa loo ogolaatay in ay ciyaartoydoodu si wada jir ah tababarka u samayn karaan.
Waxaa bilawday wajiga labaad ee tababarka kooxaha La Liga iyada oo hadda la soo dhaafay tababarkii kali-kalida ahaa waxayna ciyaartoyda Madrid si wada jir ah u sameeyeen tababarka groupka kooxda.
Eden Hazard ayaa taageerayaasha Real Madrid kaga farxiyay warkii ugu fiicnaa ee ay doonayeen wuxuuna shaaciyay in uu diyaar buuxa u yahay kulanka ugu soo horeeya ee La Liga dib loogu bilaabayo.
Eden Hazard ayaa la hadlay shabakada rasmiga ah ee kooxdiisa Real Madrid wuxuuna ka waramay xaaladiisa iyo farxada uu ka dareemayo in uu hadda si buuxda ciyaartoyda kooxdiisa uu tababarka la qaadanayo.
Eden Hazard ayaa March 5 waxa uu qaliin canqowga ah ku maray Dallas wuxuuna garoomada ka maqnaa muddo dheer laakiin go’doonkii fayraska karoonaha ayaa siiyay fursad uu hadda qayb kaga noqonayo qorshaha Zidane ee xili ciyaareedka La Liga.
Eden Hazard oo soo laabashada tababarka ciyaartoyda sida wada jirka ah loogu ogolaaday ka hadlaya ayaa yidhi: “Wanaag aad u fiican ayaan dareemayaa in aan garoonka dib ugula soo laabtay ciyaartoyda aanu isku kooxda nahay. Hadda waxaa waajib nagu ah in aanu sugno in kulamadu soo laabtaan, laakiin aad ayaan u faraxsanahay”.
Eden Hazard oo ka hadlaya waxa uu u baahan yahay ayaa yidhi: “Kadib laba bilood oo aan ka maqnaa, waxaan u baahanahay shaqo badan oo jidheed iyo shaqo badan oo kubbada ah. Waxaan doonayaa in kulanka soo socda aan diyaar u noqdo”.
Hazard oo ka hadlaya in hadda tababarku uu sidii hore ka fiican yahay ayaa yidhi: “Hadda tababarku wuu ka fiican yahay, waxaanu u tababaran karnaa sida aanu jecel nahay. Todobaadkii ugu horeeyay waxa uu ahaa mid amakaag ah”.
“Laakiin hadda waxaanu markale ku tababaran karnaa ka koox ahaan iyo sidoo kale goolhayaha. Sidaa daraadeed, waxay hadda in badan tahay sidii aanu doonaynay. Hadda waxa aanu doonaynaa waa in aanu wada jirno oo aanu isku dayno in aanu ka koox ahaan u shaqayno.
Markii uu Eden Hazard xarunta tababarka ee Valdebebas kula soo laabtay ciyaartoyda kooxdiisa Madrid waxaa la arkayay isaga oo kubbada ku shaqaynaya inkasta oo aanu wali ku soo laaban jidh ahaan halkii ugu saraysay.
Laakiin warka ugu wayn ee uu Eden Hazard sheegay waa in uu diyaar u yahay kulanka ugu soo horeeya ee xili ciyaareedka La Liga dib ugu bilaamayo.